धार्मिक, एतिहासिक महत्वले भरिएको उत्तरगया क्षेत्र::Pathivara News
धार्मिक, एतिहासिक महत्वले भरिएको उत्तरगया क्षेत्र
उत्तरगया क्षेत्रको महिमा नेपालको इतिहासमा उल्लेख छ । भगवान श्रीरामचन्द्रको पालादेखि नेपाल चीन सन्धी भएको पौराणिक कहानी जोडिएको छ उत्तरगयासंग । शताब्दिऔं देखिको ऐतिहासिक धार्मिक रूपले परिचित छ । रसुवा र नुवाकोट जिल्लाको सिमानामा पर्ने उत्तरगया बेत्रागंगा, त्रिशूली, र फलांखु तीन नदीको संगम स्थल हो । गोसाईकुण्ड स्नान गरेर कालिकामाई र उत्तरगया क्षेत्रको दर्शन गर्नु पर्ने पनि धार्मिक विश्वास रहेको पाईन्छ । यस क्षेत्रमा रहेको राममन्दिरको महिमा पनि अत्यन्त ठूलो छ । तत्कालीन राजा पृथ्वीनारायण शाहले गोसाईकुण्डबाट फर्कदा पितृ उद्धारको लागि श्राद्ध गरेर राममन्दिर निर्माण गरेका हुन् भन्ने कथन रहेको पाइन्छ ।
त्यहां रहेको सीताको मूति चोरी भयो । वालाचर्तुदशी, पुषे औंशी, रामनवमी, हरिवोधनी एकादशी,दशहरा, ऋषितर्पणी, कुशे आंैशी आदी पर्वमा भव्य मेला लाग्ने गर्दछ । टाढा टाढाबाट भक्तजनहरू आएर पुजा अर्चना गर्ने गर्दछन् । यसभन्दाअघि तप्त कुण्ड रहेको थियो जुन २०१८ सालमा फलाँखु खोलामा अएको बाढीले पुरेपछि लोप भईसकेको छ । नेपाल –तिव्वत बीच लडाई हुंदा वि सं १८४९ असोज १७ गते बेत्रावती सन्धी भएको स्थल पनि यही क्षेत्र भएकोले यस क्षेत्रको महत्व अझ बढेको छ । यो क्षेत्रलाई पर्यटकीय स्थलको रूपमा पनि चिनिन्छ । स्वदेशीका साथै विदेशीहरु पनि यस क्षेत्रमा भ्रमणका लागि आउने गर्दछन् ।
समुन्द्र मन्थनका क्रममा भगवान् शिवजीले कालकुट बिष सेवन गरी डाह शान्त पार्न पानी नपाएर प्यास मेटाउन आफुुसँग भएको बेतको लौरोले बज्रपात गर्दा पानी निकालेर पोखरी उत्पत्ती भएपछि सो ठाउँको नाम बेतवती हुंदै अपभ्रम्स भएर बेत्रावती भएको स्थानीय बुढापाकाहरूको भनाई छ ।
तिव्वती सेनासंग लडाई हुँदा नेपाली फौजले हतियार बिना नै लडाईमा सामेल भएको र नेपाली सेनाको संख्या न्यून भएकोले जंगलका रुखहरुलाई मानिसको भेष बनाएर तिव्वती सेनालाई हराएका थिए । तिव्वतले हार स्विकार गरी नेपाल भोट सन्धि भएको थियो । बेत्रावती सन्धी पछि तिव्वती सेना फर्कने क्रममा कालिकामाई मन्दिरमा बिहानको खानाका लागि गाई काटी खाएपछि कालिकामाई रिसाएर सो मन्दिरको पछाडिको भित्तामा उत्पन्न भएको किम्वदन्ती छ । यस उत्तरगया पवित्र धार्मिक क्षेत्रमा पितृ मोक्षको कामना गर्दै तिथी छुटेकाहरूले श्राद्ध तथा पुजा आजा गरे पितृ आत्माले प्राप्त गर्ने विश्वास लिईन्छ ।
आजको राशिफल: वैशाख १३ गते बिहीबार तदनुसार ई. सं. २०१८ अप्रिल २६ तारिख